नेप्सेको अनलाईन सिष्टम धितोपत्र बोर्डले ल्याउने होर ? - Artha Path Artha Path
नेप्सेको अनलाईन सिष्टम धितोपत्र बोर्डले ल्याउने होर ?
५० जना ब्रोकरको कब्जामा पुँजीबजार पुग्नुहुन्न ।
चन्द्रसिंह साउद, सीईओ, नेपाल स्टक एक्चेन्ज लि. (नेप्से)
अनलाईन कारोवारमा दैनिक समस्या आईरहेको छ, किन यस्तो भएको ?
तीन दिन हाम्रो म्याचिङ ईन्जनमा समस्या आएको हो । तपाईले जापानमा हेर्न सक्नुहुन्छ । क्यापिटल मार्केट होल प्रविधि हो नेटवर्किङ हुन्छ । हामीसंग नट्स छ । डेटा सेण्टरसंग टिएमएसको डेटासेण्टर छ । ब्रोकरसंग टिएमएस जोडिएको हुन्छ । ब्रोकरका आफ्ना स्रोत र साधनहरु हुन्छन् । इन्भेष्टरले अनलाईनबाट कारोवार गर्दा आफ्नो स्रोत र साधन हुन्छ । ईण्टरनेटको क्यापासिटि कति लिएको छ त्यो आधारमा स्पिड हुन्छ । हामीसंग ईण्टरनेटसेवा प्रदायक कम्पनीहरु छन् । कति ठाउँको कति संस्थाको यो अनलाईन चल्नु पर्छ । त्यसकारले अनलाईनमा ब्यापक समस्या भनेर मिडियाले भनिरहँदा भदौ महिनाको १४, २५ र २८ गते वास्तवमा समस्या आएको हो । त्यो समस्याको समाधान हामीले गरिसकेको छौँ । वेभ साईट चलेन भने नेप्सेको अनलाईन चलेन, इण्टरनेट चलेन भने अनलाईन चलेन, कुनै ब्रोकरकोमा समस्या आएन भने नेप्सेको अनलाईन चलेन भन्ने सबै गलत हुन् । यो सबै कुरा मीडियामा भने जस्तो होईन । लकडाउन हुनु अगाडी १२ हजार मात्रै लगानीकर्ताहरु अनलाईनमा थिए । त्यो वेला अनलाईनमा ईच्छाएनन्, आएनन भन्ने आक्षेप थियो । अहिले ९० प्रतिशतसम्म अनलाईनबाट कारोबार भएको छ ।
एक्टिभ लगानीकर्ता एक लाखभन्दा माथि रहेका छन् । अव सानाथिना समस्या आउँछन, यो प्रविधि हो । हामीले दिने सेवा सुविधामा यी सेवा प्रदायकसंग समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले यदाकदा हुनु स्भाविक हो । हामीले नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेको हुनाले डिम्याट, बैकिङ डिग्रीएसन लगायत सबै यसैमा जोडेको हुनोले समस्या आयो भनेर बजारमा जति चर्चा छ त्यति समस्या त होईन । तर पनि समस्या नै नभएका होईन । हामी ती समस्याहरु क्रमगत रुपमा समाधान गर्दै जाने हो । सफ्टवेयर र हार्डवेयरको सहयोगबाट काम गर्ने हो । १० जनालाई खाना बनाउने ठाउँमा १०० जनालाई खाना बनाएर हुन्छ र ? हार्डवेयरको क्षमता पनि यस्तै हो । हार्डवेयरका क्षमता पनि बढाउँदै जानुपर्छ । जब लगानीकर्ताको संख्या बढ्छ त्यो आधारमा यसको क्याासिटि, ईफिसेन्सी बढाउँदै जानुपर्छ । बढाउँदै गएका छौँ । गत बर्ष दैनिक ४०–५० करोडको कारोवार हुँदा धेरै ठूलो भयो भन्थ्यौ । हाल ३–४ अर्वको कारोवार दैनिक रुपमा हँुदै गएको छ । यहि अनलाईनले थेगेको होईन र ? होनि त । क्यापासिटि बढाउनमा हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ । यसको लागि आईटी पोलिसी ल्याएका छौ । मिडियाका कतिपय साथीहरुले क्यापिटल मार्केट बुझेका छैनन । भनेको सुनेको आधारमा समाचार आएको देखिएको छ ।
भनेको मतलव अनलाईन कारोवारमा ईन्भेष्टर बढे, क्यापासिटि कम भयो भन्ने हो ?
त्यो मात्रै होईन । ईन्भेष्टर बढेर क्यापासिटि नबढाएको होईन । हाम्रा सेवा प्रदायक संस्था धेरै छन् । अस्ति हामीले जनरल इन्स्योरेन्सको आइपिओमा सर्भर डाउन भयो । अनलाईनले काम नगरेको हो त ? हाम्रा साधन स्रोतले काम नगरेका हुन । अपडेट गर्ने काम हामी निरन्तर गरिरहेका छौँ । बजारमा भनेजस्तो अनलाईनमा समस्या छैन ।
धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षले अर्काे सफ्टवेयर ल्याउने कुरा भएको थियो, चेन्ज गर्ने पनि भनेको खास कुरा के हो ?
त्यो मलाई थाहा भएन । उतै सोध्नुपर्यो । उहाँ नै बोर्डमा हुनुहुन्थ्यो पहिले । उहाँहरुले ल्याएको हो यो । विचमा समस्या आएको हुँदा भन्नु भएको होला । अहिले समस्याको समाधान भइसक्यो । सिस्टममा समस्या आउला कहिलेकाहि । नेप्सेको अनलाईन सिस्टम धितोपत्र बोर्डले ल्याउने होर ? यहाँ पनि स्वतन्त्र सञ्चालक समिति छ । मन्त्रालयको प्रतिनिधि हुन्छ । उहाँहरुले यस्तो किसिमको सिस्टम चाहियो भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ । तर हाम्रो ऐन नियममा त्यस्तो व्यवस्थापन छैन । त्यसकारण समस्या आयो उहाँहरुलाई पनि समस्या भयो । जस्तै उदाहरणका लागि राम बहादुर श्रेष्ठ हुनुपर्नेमा राम बहादुर शर्मा नाम हाले छ । ईन्भेष्टर मेरो अनलाईनले काम गरेन भनेर भन्छ तर समस्या केवाइसीमा रहेछ । यी यस्ता पनि समस्या आउँछन् । त्यसकारणले भनेको होला । धितोपज्ञ बोर्डसंग छलफल गरेका छौँ । अव छुट्टै ल्याउनुपर्छ भन्ने मनसाय होईन । यो भैरहेको सिस्टम राम्रो बनाउनुपर्छ भन्ने मनसाय धितोपत्र बोर्डको हो ।
ब्रोकरले कारोवारका लागि नयाँ टिएमएस ल्याउने भनिरहेका छन, लगानीकर्तासंग छुट्टै शुल्क उठाउने भन्ने छ, यो साचो हो ?
यो दुनियामा नभएको कुरा हो । सबै ब्रोकर मिलेर एउटा सफ्टवेयर लिएर ५० वटै ब्रोकर एकै ठाउँमा आएर भोली कारोवार उहाँहरुले गर्ने र सफ्टवेर नै उहाँहरुले बनाउने हो भने स्टक एक्स्चेन्जले त्यो काम गर्न दिन्छ ? नेपाल सरकारले दिन्छ ? क्यापिटल मार्केटले दिन्छ होला ? भोलि ईन्भेष्टरले त्यसलाई ट्रस्ट गर्छन ? आजको दिनमा ५० जना ब्रोकर हुँदा सबै ब्रोकरको सर्भिस हामीले राम्रो किसिमले पाएनौ भनेर कमेन्ट आउँछन् । भोलिको दिनमा क्लेरिङ पनि उनीहरुलाई दिने, ब्रोकर लाईसेन्स पनि उनीहरुलाई दिने र डेटा सेण्टर, ट्रेड म्यानेजमेण्ट सिस्टम कम्वाईनले ५० जना मिलेर काम गर्ने हो भने ५० जनाको बर्चस्व रहन्छ । त्यो कसरी सम्भव होला र ? उहाँहरुको काम भनेको डेटा सेण्टर मात्रै हो ।
भोलि लगानीकर्ताको डेटा एकै ठाउँमा गएर सबै ब्रोकरले हेर्ने र उनीहरुको एकलौटि अधिकार हुने भएन । त्यो कुरा नि विचार गर्नुपर्छ । अहिले ईन्भेष्टरले पनि एकदम ठिक छ भनेका होलान तर दिर्घकालिन अवस्थामा त्यसको असर पर्छ । गर्न दिने तर यसलाई कसरि ब्यवस्थित गर्ने भनेर छलफलमा छौँ । हामी कहाँ अफिसियल्ली आएका छैनन् । सबै ठाउँमा एकत्रित गरेर त्यो डेटा सेण्टर र टिएमएस हामी दिँदैनौ । हाम्रो कन्सेप्ट ईन्डीभिजुअल ब्रोकरले ईन्डीभिजुअल टिएमएस बनाएर लिनुपर्छ भन्ने हो । सबै जनालाई एकै ठाउँमा राख्यो भने भोलि समस्याको सम्भावना हुन्छ । त्यसकारण त्यस्तो परिस्थिती आउने हो भने अर्काे ढंगले हिड्नुपर्ने हुन्छ ।
अहिले सरकारी संस्थाहरु जो छन् उनीहरुका सहायक कम्पनीलाई पनि ब्रोकर लाईसेन्स दिनुपर्ने हुन्छ । बाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, नागरिक लगानी कोषले पनि ब्रोकर लाईसेन्स लिनुपर्छ । हल्ला जस्तो वास्तविक होईन । त्यसले गर्ने अषरको अध्ययन गर्छाैं । उहाँहरुको व्यवसाय बढाउन दिनुपर्छ तर सबै ठाउँमा उहाँहरुको मात्रै एक्सेस हुँदा भोलि क्यापिटल मार्केटको सुधार, विकास, लगानीकर्ताले पाउने सुविधामा कहि कतै सर्भिसमा समस्या हुनु भएन, पैसा धेरै लाग्नु भएन ।
टिएमएस र डेटा सेन्टर चाँही छट्टै कम्पनी बनाएर दिने की कसरी दिने ?
टिएमएस एउटा ब्रोकरलाई एउटा ट्रेड म्यानेजमेण्ट उसले बनाउछ र उसको कारोवार मात्रै उसलाई थाहा हुन्छ । सबैलाई ईण्डिभिजुअल दिने हो । ५० जनाको एक ठाउँमा टिएमएस राखेर एउटाको कारोवार अर्काेले हेर्ने, अर्काको अर्काले हेर्ने भयो भने त त्यो भालि ब्रोकर कम्पनीको विचमा पनि कण्ट्रोभर्सेस हुन्छ । त्यस्तो संस्था चलाउन स्वतन्त्र हुनुपर्छ । ब्रोकर कै त्यहि म्यानेजमेण्ट हुने हो भने भद्रगोल हुन्छ । हामीले भनेका छौँ ईण्डिभिजुअल ब्रोकरले ईन्डीभिजुअल टिएमएस चलाउनुपर्छ । नसक्नेले हाम्रो टिएमएस छ त्यहि टिएमएसमा चलाउनुपर्छ । तर कम्तिमा पनि उहाँहरुले के गर्नुपर्यो भने हार्डवेयरको संख्या आफैले थप्नुपर्यो । कम्पनीमा आईटी जानेको कर्मचारी हुनुपर्यो । हामीलाई अनलाईनमा समस्या त्यसरीनै परेको छ । ब्रोकर कम्पनीको साधन स्रोत र क्षमता बढाउनुपर्ने हुन्छ ।
डाटा सेण्टरको बारेमा प्रक्रिया केहि अगाडी बढेको छ ?
डाटा सेण्टर हामीले ब्रोकरलाई कममा जाउ भनेको छ । आफै हार्डवेयर किन्ने हो आफैमा राख, आफैले हार्डवेयर नकिन्ने हो भने राम्रो विश्वसनिय कुनै डेटा सेण्टरमा सेवा लिन सकिन्छ भनेर हामीले भनेका छौँ । शुरुमा ब्रोकरलाई आफै किन्नुहोस भनेको हो तर अलि महँगो पर्ने भयो, हामीले खर्च गर्न सकेनौ भनेकाले डेटा सेण्टरमा लगेको हो । यसको दिर्घकालिन समाधान होईन । त्यसका लागि नेप्से आफैले अध्यायन गरिरहेको छ । नेप्सेले आफै डेटा सेण्टर राख्ने की भन्ने छ । यो आर्थिक बर्षमा अध्ययन हुँदै छ । नेप्सेले नै राख्यो भने त उहाँहरुको डेटा हामीकहाँ हुन्छ । सुरक्षित हुन्छ समस्या भएन ।
अर्थ मन्त्रालयले पनि सफ्टवेयरका विषयमा चासो दिएको र अर्काे फेर्ने भन्ने छ के हो ?
चासो लिएको होईन । अस्ति तीन दिन समस्या आयो । समस्या आएपछि के भएको भनेर मन्त्रालयले चासो लिएको हो । हामीहरु पनि गएका थियौँ । सफ्टवेयरका बारेमा जे हल्ला थियो त्यसकोबारेमा पनि स्पष्ट पार्यौ । केहि निर्देशनहरु पनि मन्त्रालयले गरेको छ । ती कामहरु हामी बढाउदै छौं ।
मन्त्रालयको सफ्टवेयर फेर्ने कुरा गरेको होईन ?
होईन कम्तिमा पाँच बर्ष राख्नुपर्छ । यत्रो खर्च गरेको छ । सिस्टमले नै काम गरेन भनेर भन्न मिल्दैन । यसमा अप्टि माइजेशनका कुराहरु हुन्छन । सफ्टेवयर आफैमा प्रोवलम छैन ।
यस्तो खालको समस्या आएपछि नेप्से तत्काल सूचना दिएर बुझाउन नसकेको हो की ?
पुतलिसडकमा बाटो खन्दा तार काटियो । हामीले त्यो कसरी चेक गर्न सक्छौ । हामीले गर्ने त्यो तार काटिएपछि अर्काे ईण्टरनेट जोड्ने हो । जोड्दा पनि त केहि समय लाग्छ नी । त्यति मात्रै भएको हो । हामीसंग तीनवटा लेयरको सेक्युरिटी छनि त ।
अनलाईन कारोवारका लागि कति खर्च भयो ?
हामी कहाँ झण्डै ९ करोडको हार्डवेयर हो । त्यस्तै ९ करोड हाराहरीमा सफ्टेवयर हो । जम्मा खर्च १८ करोड हो । यसमा १३ प्रतिशत भ्याट र शुरुमा एसआरएस बनाउँदा ५० लाख जति खर्च भएको छ । यो २०७२ सालेदखिको प्रोजेक्ट हो । १९ करोड जतिको खर्च हो यसमा ।
यत्रो खर्च गरेर पनि सेवा कमजोर भयो हैन ?
यो सफ्टवेयर त सस्तो हो । म नेप्से आउँदाखेरि सिस्टम चलाउने मल्टि एक्सेस भएको यस्तो किसिमको सिस्टम कति पैसामा आउछ भनेर मैले नि बुझेको थिए । भारतमा प्रयोग गरेको जर्मनिको सफ्टवेयर हो । नेपाली रुपैयाँ त्यतिवेलामा ७४ करोडको भनेको छ । म यही सेक्टरबारे जनाकारी लिन जर्मनिमा मेरा साथिभाईहरुसं बुझैको थिए । सफ्टवेयरमा पनि धेरै विवाद भएकाले मैले धितोपत्र बोर्ड र अर्थ मन्त्रालयलाई पनि रिक्वेस्ट गरेको थिए । अर्थ मन्त्रालयमा पनि कमिटि बन्यो । कमिटिले सफ्टवेयर अगाडी बढाउने की नबढाउने भनेको थियो । त्यसपछि नै आएको हो । नेपालबाट हेर्दा महँगो लाग्छ तर विदेशको जस्तो हेर्ने हो भने धेरै सस्तो हो । विदेशमा २०–२५ करोड त एउटा ब्रोकरले खर्च गरेको हुन्छ । हामी खोज्ने अन्तराष्ट्रिय स्तरको पैसा चाँहि १७–१८ करोडको सफटवेयर हुँदा महँगो भयो भन्ने । हामीले झण्डै २ करोड रुपैयाँ लाईसेन्सको मात्रै तिर्यौ । प्रविधि भन्ने महँगो हुन्छ । प्रविधिले धेरै सजिलो पनि बनाएको छ । यसमा रिस्क पनि छ । यसमा लागत पनि बढी छ ।
यसमा तलमाथि त भएन ?
त्यो मलाई थाहा भएन । म त सबै तयार भएपछि आएको हुँ । मैले कार्यान्वयन गरेको मात्रै हो । कार्यान्वयन गर्नु अगाडी सोधेको पनि हो ।
सिडिएसलाई नेप्सेमा गाभ्ने र अरु पार्टनर ल्याउने कुरा थियो नि ?
त्यो मलाई थाहा छैन । गाभ्ने कुरा पनि होईन । नेपाल सरकारको बजेटमा धितोपत्रको नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज र सिडिएसको पुर्नसंरचना गर्ने भन्ने थियो । यहि अन्तर्गत हल्ला भएको हो । त्यो पुर्नसंरचना गर्ने सन्दर्भमा पनि हामीले मात्रै त्यसरि भन्नु हुँदैन किमभने नेप्से नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा सञ्चालित संस्था हो । हाम्रो स्टके होल्डर पनि सरकारको हो । हामीलाई प्रतक्ष अप्रत्यक्ष नियमन गर्ने पनि अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्ड हो । उहाँहरुले के निर्देशन दिनुहुन्छ त्यो अनुसार मात्रै संस्थामा अगाडी बढ्छौ । २०७३÷०७४ मा नै पुर्नसंरचना गर्नुपर्ने भनेर वित्तीय क्षेत्र रणनीति अन्तर्गत नै आएको हो नि । अहिलेसम्म भएको छैन । जवसम्म सरकारबाट त्यो काम हुँदैन तवसम्म भन्न सजिलो छैन ।
तपाई आएको तीन बर्ष भयो, के–के काम भयो ?
नेप्सेमा सव–ईण्डेक्स ५ वटा थिए अहिले १२ वटा भएका छन् । हामी कहाँ कारोबार सेमी अटोमेटिकमा हुन्थ्यो । कारोबार विनियमवली चेन्ज भयो । लिस्टीङ बाईलज धेरै पुरानो थियो त्यो चेन्ज भयो । नियम कानुन चेन्ज गर्न सरकारी संस्थामा कम समय लाग्छ ? त्यो मैले गरेको छुँ । धितोपत्रसंग सम्बन्धित लिस्टिङ विनियमावली र धितोपत्रसंग सम्वन्धित कारोवार विनियमावली चेन्ज भयो । मार्जिन ट्रेडिङसंग सम्वन्धित काम गर्यौ ।
नेपालको क्यापिटल मार्कटको कोषेढुंगा अनलाईन कति रिस्क लिएर काम गरिरहेका छांै । कसैले देखेको छ । त्यो पनि हामीले पनि स्थापिति गरेका छौ । लिष्टेड कम्पनीको सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय तत्काल अपलोड गर्ने सुविधा दिएको छ । लगानीकर्तालाई तत्काल जानकारी हुन्छ । पहिले नेप्सेमा आउँछ एकदुई दिन थन्काउँछन्, गोप्य सूचना चुहावट हुन्छ त्यसपछि मात्रै नोटिस आउट हुन्छ भन्ने आक्षेप थियो । त्यो अहिले बन्द भएको छ । पारदर्शिकता आयो । सात वटै प्रदेशमा लगानी कर्ता सचेतना, पुँजी बजारको विकास प्रवद्र्धनको काम गरेका छौं । ती काम पनि नयाँ हो ।
बैंकहरुलाई ब्रोकर लाईसेनस दिने कुरा नि ?
बैकलाई ब्रोकर लाइसेनस नेप्सेले मात्रै भनेर हुँदैन । नेप्सेले त एप्लिकेशन नै आह्वान गरेर १२ वटाको एप्लिकेशन आएको छ त्यसलाई थाति राखेका छौ । नियमन निकायबाट के आउँछ त्यहि अनुसार अगाडी बढ्छौ । हाम्रो तयारि पुरा भएको छ ।
बैंक अफ काठमाण्डूले शेयरधनीहरुलाई १६ प्रतिशत लाभांश दिने
काठमाडौं । बैंक अफ काठमाण्डूले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लाभांश घोषणा गरेको छ । बैंकले
आइतबार बढेको सुनको भाउ ओरोलो लाग्यो, आजै ४ सयले घट्यो
काठमाडौं । सोमबार सुनको भाउ आरोला लागेको छ । आज सुन तोलामा ४ सयले घटेर
ताम्राकार कम्प्लेक्सबाट साढे ७ लाखको मोबाइल चोरी गर्ने नुवाकोटका राईसहित ५ जना पक्राउ
काठमाडौं – करिब साढे ७ लाख बराबरको मोबाइल चोरी गरेको आरोपमा प्रहरीले नुवाकोटका राईसहित ५
बुटवल बल्न थालेपछि ओली–प्रचण्डको गुहार माग्न मुख्यमन्त्री पोखरेल बालुवाटारमा
काठमाडौं । शुक्रबार प्रदेश राजधानी बुटवलबाट दाङको भालुवाङ सार्ने निर्णय बालुवाटारमा नेकपाका दुई अध्यक्षले गरेपछि
प्रभु इन्स्योरेन्सको सञ्चालकमा पाण्डे
शिक्षकलाई विद्यालय पुग्न निर्देश ,कक्षा १२ को परीक्षा
महालक्ष्मी विकास बैंकले कर्मचारीको पोशाक भत्ता काटेर बाढ्यो